Token asaService စျေး - အွန်လိုင်း TAAS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Token asaService (TAAS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Token asaService (TAAS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Token asaService ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $6 113 743.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Token asaService တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Token asaService များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Token asaServiceTAAS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.21Token asaServiceTAAS သို့ ယူရိုEUR€1.03Token asaServiceTAAS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.924Token asaServiceTAAS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.1Token asaServiceTAAS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr10.8Token asaServiceTAAS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.7.63Token asaServiceTAAS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč26.77Token asaServiceTAAS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł4.51Token asaServiceTAAS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.6Token asaServiceTAAS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.69Token asaServiceTAAS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$26.85Token asaServiceTAAS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$9.38Token asaServiceTAAS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$6.5Token asaServiceTAAS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹90.68Token asaServiceTAAS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.204.38Token asaServiceTAAS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.66Token asaServiceTAAS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.85Token asaServiceTAAS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿37.67Token asaServiceTAAS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥8.41Token asaServiceTAAS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥129.13Token asaServiceTAAS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1436.53Token asaServiceTAAS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦467.53Token asaServiceTAAS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽88.7Token asaServiceTAAS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴33.09
Token asaServiceTAAS သို့ BitcoinBTC0.000105 Token asaServiceTAAS သို့ EthereumETH0.00315 Token asaServiceTAAS သို့ LitecoinLTC0.0223 Token asaServiceTAAS သို့ DigitalCashDASH0.0133 Token asaServiceTAAS သို့ MoneroXMR0.0136 Token asaServiceTAAS သို့ NxtNXT94.43 Token asaServiceTAAS သို့ Ethereum ClassicETC0.178 Token asaServiceTAAS သို့ DogecoinDOGE349.38 Token asaServiceTAAS သို့ ZCashZEC0.0147 Token asaServiceTAAS သို့ BitsharesBTS37.3 Token asaServiceTAAS သို့ DigiByteDGB38.74 Token asaServiceTAAS သို့ RippleXRP4.3 Token asaServiceTAAS သို့ BitcoinDarkBTCD0.0417 Token asaServiceTAAS သို့ PeerCoinPPC4.02 Token asaServiceTAAS သို့ CraigsCoinCRAIG551.64 Token asaServiceTAAS သို့ BitstakeXBS51.63 Token asaServiceTAAS သို့ PayCoinXPY21.14 Token asaServiceTAAS သို့ ProsperCoinPRC151.91 Token asaServiceTAAS သို့ YbCoinYBC0.000651 Token asaServiceTAAS သို့ DarkKushDANK388.54 Token asaServiceTAAS သို့ GiveCoinGIVE2622.25 Token asaServiceTAAS သို့ KoboCoinKOBO275.83 Token asaServiceTAAS သို့ DarkTokenDT1.11 Token asaServiceTAAS သို့ CETUS CoinCETI3496.83
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 12:15:03 +0000.